अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर अपेक्षित भन्दा निकै कमः बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार| Corporate Nepal
अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर अपेक्षित भन्दा निकै कमः बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार
माघ ३०, २०७७ शुक्रबार ११:०५
कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र संगै नेपालको अर्थतन्त्रमा जसरी नकारात्मक असर पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसरी अर्थतन्त्रमा असर परेको देखिएको छैन । होटल र भ्रमण व्यवसाय वाहेकका क्षेत्रमा धेरै असर परेको तथ्याङ्कले देखाउँदैन । यो आर्थिक बर्षको ६ महिनामा हाम्रा परिसुचकहरुलाई हेर्दा पनि अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर अपेक्षित भन्दा निकै कम त कहि उल्टो भएको पनि देखिएको छ। हेरौँ हाम्रो ६ महिनाका केहि सुचकांकहरूः
– १४.४ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ, अघिल्लो बर्ष ८.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । बढेको कर्जाहरुमा कृषि क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशतले भन्दा बढिले बढेको देखिन्छ भने मार्जीन लेण्डिङ ५० प्रतिशत भन्दा बढिले बढेको छ । हायर पर्चेच कर्जा ४.४ प्रतिशतले घटेको छ । कुल कर्जा रु ३७ खरब नाघेको छ ।
– निक्षेप ९.२ प्रतिशतले बढेको छ । बार्षिक गणना गर्दा २२ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । गत वर्ष ४ प्रतिशत ले बढेको थियो । कुल निक्षेप रकम रू ४२ खरब नाघेको छ ।
– बचत निक्षेपको बृद्धि गत ३ बर्ष देखि घटिरहको थियो जो पहिलो पटक यो बर्ष बढेको छ । कुल निक्षेपमा बचत निक्षेपको अंश ३२ प्रतिशत बाट ३३.६ प्रतिशत भएको छ।
– सहुलियत दरको पुनरकर्जा रु ६९.९६ अरब ।सहुलियतपुर्ण कर्जा रु १०० अरब नाघेको छ ।
– कोभिडको कारण घट्ने प्रक्षेपण गरिएको रेमिटेन्स ११.१ प्रतिशतले बढेको छ । रु. ४९५ अरब रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।
– ६.१ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ भने आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ । सोधनान्तर बचत रु १२४.९२ अरब छ ।
– बिदेशी मुद्रा सन्चिती ९.७ प्रतिशतले बृद्धि भई अमेरिकी डलर १२.७८ अरब पुगेको छ । यो रकम १२.६ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ ।
– उपभोक्ता मुद्रास्फिति ३.५६ प्रतिशत छ । गत बर्ष ६.८२ प्रतिशत थियो ।
– सरकारले ६ महिना सम्ममा रु ४२२.२४ अरब राजश्व संकलन गरि चालु खर्च रु ३४२.३६ अरब र पुँजीगत खर्च रु. ५०.८२ अरब गरेको छ ।
– बजारमा तरलता बढि रहेको कारण निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ भने ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारत औसत दर गत बर्षको ३.१७ प्रतिशतबाट घटेर ०.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
– बाणिज्य बैकहरुको औषत आधार दर २.२५ प्रतिशतले घटेर ७.१८ प्रतिशत कायम रहेको छ । गत बर्ष यस्तो आधार दर ९.४३ प्रतिशत थियो ।
– ७५३ स्थानीय निकायहरू मध्य बाणिज्य बैकहरुको कारोबार ताप्लेजुङको मिक्वाखोला, जाजरकोटको जुनीचांदे, धादिङको रुवी भ्याली र बझाङको काँडा गरी ४ वटा दुर्गमको स्थानीय निकाय बाहेक ७४९ वटा स्थानीय निकायबाट भइरहेको छ ।
– पौष मसान्तमा नेप्से ईन्डेक्स २२८.६ रह्यो । अहिले शेयर बजारको कारोबार रकम एकै दिनमा रु १० अरब नाघेको छ भने नेप्से ईन्डेक्स २५०० नाघेको छ । यो गत बर्षको पौष मसान्त भन्दा दुईगुणा भएको छ ।
राजनैतिक अस्थीरताको दीर्घ रोग बाहेक अरु हिसाबले अर्थतन्त्रलाई अध्ययन गर्दा सकारात्मक सूचकांक देखिन्छन् ।
(ज्ञवाली नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक हुन् ।)
‘उद्योग व्यवसायलाई उकास्न बैंकको ब्याजदर न्यून हुनुपर्छ’
खस्कँदो बाताबरण संरक्षण, बढ्दो जलवायु परिवर्तन र नाममा सीमित दीगो विकास
‘रेमिट्यान्सलाई प्रतिफल ग्यारेन्टीका आयोजनाको आईपीओमा लगाउनुपर्छ’
पहिलो पटक जहाज चढ्दाको अनुभव
अब निर्जिवन बीमाको पूँजी दुई अर्ब ५० करोड, जीवनको पाँच अर्ब, पूनर्बीमाको २० अर्ब तोक्नुपर्छ
चैतभित्रै ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा